Archives Good — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Kulungile Kulungile Kulungile Kulungile Kulungile Kulungile Kulungile Kulungile Kulungile Kulungile Kulungile Kulungile Kulungile Kulungile
"Ndilungile” ke enye yeengoma yokugqibela ukuba kubhalwe ukuze icwecwe lam elitsha, Ubomi Good. Lecrae ndize okunene wabhala waza wabhala ingoma eyahlukileyo ngokupheleleyo, kwaye uyithanda kuqala. Kodwa ekugqibeleni sagqiba ukuba kulunge kanye; yaye sasifuna ukubeka into enkulu. Ngoko idlale ibetha ezimbalwa kuye ukuba lyrics ndingazimisanga zabhalelwa ke, kwaye bobabini ilithanda lo. Ukuba iziganeko, ndlongo, kwaye anomtsalane.
Ndamxelela ukuba ndifuna ukuba babhale umhobe ukuba yaziswe ukhuseleko lwethu kuKrestu. Ndandifuna ukukhuthaza amaKristu ukuba ayeke abahlala uloyiko kwaye uqale abahlala kumaRoma 8. Sagqiba kwi "Mna Good” umxholo, sabuza iNkosi uncedo, kwaye saqalisa ekubhaleni ezimbombeni ongafaniyo Reach ka-Atlanta studio. Siye ebhalwe inkoliso vocals bethu ngobo busuku, xa kwenziwa konke ndakuthanda thina.
Ngethemba le ngcaciso lwamazwi kuya kusinceda ukwetyise umxholo ...
Mna ndive kufika imbandezelo ukuze kum, ukufa ekhayeni lam indlela /
Ukoyika uthi Mmelika kutshabalala bro, kodwa ukuba akukho nto kuthi iNkosi yam /
Kuba kwisiqingatha sokuqala 2011, Andiwonanga iingoma, ayinazimpawu, akukho ibonisa, akukho nto. Ndafudukela Washington DC kwaye bathabatha 5 iinyanga ngenxa wenkxaso eyayichumile. Nangona mna ukuba balihambahambe ihlabathi yaye emi phambi ulwandle abantu bonke ubusuku, ngomnye namaxesha echumayo ebomini bam. Xa lwangaphakathi ophele ndaqalisa kwakhona abahambahambayo ngokucotha waqalisa ukusebenza umculo entsha. Around sokuwa ikhatyelwe izixhobo ngokupheleleyo ukusebenza icwecwe lam lwesine solo. Yaye emva kweenyanga yomsebenzi onzima, yelicwecwe kwenziwa intle kakhulu.
Andikwazi nokuba ukuchaza ukuba nemincili mna ukuba ayiyeke. Mna ndisoloko ndifuna ukunika abantu into Mna akaninikanga phambi kwabo. Andifuni ukuba remake icwecwe Sele zenziwe. Ndifuna ukuba akunike album olutsha, umculo entsha, kunye neendlela ezintsha yokubhiyozela inyaniso inye indala.
e 2006 kwi icwecwe lam lokuqala, Ukuba Bebesazi, Ndandifuna ukuxelela abantu unguThixo ozukileyo ndifuna ukuba bazi. e 2008, "20/20″ baphuma ndandifuna ukukhuthaza abantu ukubona iNkosi bayibonayo. 2 kwiminyaka kamva, "Phakathi Two…